काठमाडौँ माघ १३ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर अगाडि सारेका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको र लक्ष्यित प्रगतिसमेत हासिल हुन नसकेको पाइएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले तय गरेको चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक समीक्षामा लक्ष्यित प्रगति हासिल नभएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ ओटा विभिन्न परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने दोस्रो प्राथमिकतामा ३२ ओटा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
तोकिएका कार्यक्रममध्ये पहिलो प्राथमिकतामा रहेका परियोजनाको एकमुष्ट प्रगति २९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा परेका परियोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति २२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । पूँजीगत र भौतिक प्रगति हुन नसकेका कारण मन्त्रालयका कार्यक्रमको प्रभावकारितासमेत बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले चालु आवका लागि रू.२२ अर्ब ८० करोड ९२ लाख ५७ हजार बजेट कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको छ । त्यसमा पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाका लागि रू. २१ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३५ हजार र दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाका लागि रू. एक अर्ब १७ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्राथमिकीकरणका आधारमा हेर्दा वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था दुरुहपूर्ण रहेको छ । प्रथम चौमासिक अवधिमा अख्तियारी ढिलो भई तथा कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ भएका कारण दबाब बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । कुल ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने आयोजनालाई सचेत गराइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवको ६ महीनामा पनि युवा लक्षित व्यावसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, अभियानमुखी, मध्यपहाडी र युवा लक्षित मत्स्य कार्यक्रम, दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम, बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम, मध्य पहाडी बुहत्तर मकै उत्पादन, मसिनो तथा बासनादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, अभियानमुखी मकै भटमास उत्पादन कार्यक्रम, समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्रलगायतका परियोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
त्यसैगरी, कृषि विकास आयोजना जनकपुर, बर्डफ्लु नियन्त्रण आयोजना, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दिगो भू–व्यवस्थापन आयोजनाको प्रगति पनि न्यून रहेको छ । तोकिएका कार्यक्रमको प्रगति न्यून भएको विषयमा मन्त्रालयको समेत चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
कृषि विकास मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीका अनुसार कतिपय कार्यक्रममा दक्ष जनशक्तिको अभाव, समयमै कार्यक्रमको अख्तियारी नहुनुजस्ता विषयले समस्या देखिएको छ । वित्तीय तथा भौतिक प्रगति नभएका आयोजनालाई सचेत गराइएको जानकारी दिँदै मन्त्री पराजुलीले आगामी चैतसम्म सबै आयोजनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने बताए ।
मुलुक कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि क्षेत्रमा नै सरकारको कम ध्यान गएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ तर समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । मन्त्रालयकाअनुसार ७५ वटै जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालय र इलाका कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र स्थानीय जनताको चाहनाअनुसार कार्यक्रम चयन हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । ती समस्या समाधान गर्नका लागि मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनको खाकासमेत अगाडि सारेको छ । -रासस